Android P wuxuu xayirayaa marin u helida makarafoonka barnaamijyada kujira asalka | Androidsis
Shalay waan kuu sheegeynaa in Android P waxay dooneysay inay noo keento hawl cusub oo ay ku xireyso marin u helka kamarada barnaamijyadan asalka ahaa. Qiyaasta ay Google rajeyneyso inay ku ilaaliso asturnaanta isticmaaleyaasha taleefanka nidaamka hawlgalka. Maalin un kadib, qiyaas cusub oo aad ugu eg tii shalay ayaa la ogyahay.
In kasta oo kiiskan, Qiyaasta cusub ee Android P waxay xannibi doontaa marin u helka makarafoonka barnaamijyada asalka ah. Sidan oo kale suurtagal noqon mayso in la dhagaysto ama la duubo waxa isticmaalahu sheegayo.
Marka waxaa mar kale cad in amniga iyo asturnaanta adeegsadayaashu ay yihiin mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee horumarinta Android P. Sababtoo ah labadan tallaabo ayaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo dadka isticmaala. Haddana waa ku mahadsan tahay lambarka AOSP inbadan ayaa laga ogyahay shaqadan.
Xaaladdan oo kale, barnaamijka asalka ah ma awoodi doono inuu galo makarafoonka. In kasta oo ay ka duwan tahay waxa ku dhaca kamaradda, ma jiro farriin khalad ah. Waxa dhici doona waa taas xogta uu helay codsigu way madhan tahay. Sidaas hab this ma awoodi doontid inaad basaasaan on user.
Xaaladda way ka badan tahay ama ka yar tahay sidii ay ku shaqeyn jirtay Android P soo bandhigtay shalay. Marka uu jiro codsi adeegsanaya makarafoonka si uu wax u qoro oo uu aadayo xagga dambe oo uu noqonayo mid aan firfircooneyn, waxay si otomaatig ah u joojin doontaa helitaanka duubista makarafoonka. Taabadalkeed waxaad heli doontaa xog madhan. Marka barnaamijku ku soo laabto xagga hore, ka dib waxa uu duubista ka heli doonaa makarafoonka markale.
Sidaa darteed, waa hawl loogu talagalay in lagula dagaallamo barnaamijyada xun. Maaddaama ay badanaa helaan marinka makarafoonka inta ay ka shaqeeyaan asalka. Sidan, mahadsanid tan muuqaal cusub oo ku jira Android P, tani waxay ka mid noqon doontaa waayihii la soo dhaafay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » Android P ayaa xannibi doonta helitaanka makarafoonka barnaamijyada asalka
Meizu X2 ayaa la xaqiijiyay dhamaadka 2018